दाङमा तीनवटा केन्द्रका सबै जिम्मा... :: सुजिता कार्की :: Setopati
दाङमा तीनवटा केन्द्रका सबै जिम्मा महिलालाई
दाङमा तीनवटा मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण जिम्मा महिलालाई प्रदान गरिएको छ।
बिहिबार हुन गइरहेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तीन वटा मतदान केन्द्रमा अधिकृतसहित सुरक्षाको जिम्मा समेत महिलालाई प्रदान गएिको दाङका सहायक निर्वाचन अधिकृत भुपाल भण्डारीले बताए। दाङमा कुल ३ सय ९४ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। त्यसमध्ये तीन वटा मतदान केन्द्रमा मतदान गराउने गरि महिलालाई मात्रै जिम्मा दिइएको उनले बताए ।
निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को घोराही उपमहानगरपालिका १७ मा रहेको गोरक्ष रत्ननाथ मावि चौघेरा ‘क’ र ‘ख’ मतदान केन्द्रमा निर्वाचन गराउन कर्मचारी र प्रहरी सबै महिलाई नै खटाइएको छ। यहाँको ‘क’ मतदान केन्द्रको मतदान अधिकृतमा लक्ष्मी सेजु र सहायक मतदान अधिकृतमा ईच्छा महतलाई खटाइएको छ ।
अन्य ६ जना महिला कर्मचारीसहित प्रहरी पनि महिला नै खटिएका छन्। चौघेराकै ‘ख’ मतदान केन्द्रमा अमृताकुमारी पुन: मतदान अधिकृत र प्रशंसा गिरी सहायक मतदान अधिकृतका रूपमा खटेको भण्डारीले बताए । दुवै मतदान केन्द्रको जिम्मा सम्हाल्ने गरि महिला प्रहरी सहायक निरीक्षक नन्दकली कटवालको कमाण्डमा प्रहरी सुरक्षामा खटिएको सहायक निर्वाचन अधिकृत भण्डारीले बताए ।
त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा एउटा र निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा दुई वटा मतदान केन्द्रको जिम्मा महिलालाई प्रदान गरिएको भण्डारीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को घोराही उपमहानगरपालिका ३ माबि झिङनी ‘क’ केन्द्रमा प्रतिभा बोगटी मतदान अधिकृत र शोभाकुमारी आचार्यलाई सहायक मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।
उक्त मतदान केन्द्रमा खटिएका अन्य ६ जना पनि महिला कर्मचारी नै रहेका छन् । त्यहाँ प्रहरीपनि सबै महिला नै खटाउने योजना बनाएको भएपनि अभावको कारण केही पुरुष प्रहरी पनि खटाउनु परेको सहायक निर्वाचन अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २०, २०७४, ०५:१६:५७